စိတ်ကြိုက်ဆွဲ – Grab Love Story
ကိုသိန်းဦးတစ်ယောက် ရေချိုးပြီးကာစမို့ ဆေးလိပ်တိုကို မီးညှိကာ တစ်ချက်ဖွာလိုက်သည်။ ကိုသိန်းဦးမှာ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။ တယောက်တည်းသမားမို့ ၂၄နာရီတာဝန်ယူရသော ဤအလုပ်မျိုးကိုကြိုက်သည်။ နေစရာ အိမ်ငှါးရန်မလိုသည်မို့ လစာက စားသောက်စရိတ် တခုသာသုံးရသည်။ ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသည်ပေါ့။ အသက် ၄၅နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မိန်းမမယူ လူပျိုကြီးဖြစ်သည်။ သူ မိန်းမမယူတာက စိတ်မဝင်စား၍မဟုတ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားမဝယ်၊ အငှါးကားသာ စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုသိန်းဦး ပြောနေကျစကားက…” အငှါးကားစီးတာ ကားမော်ဒယ်လ်အစုံ၊ အမျိုးအစားအစုံ၊ အရောင်စုံ စီးချင်တာရွေးစီးလို့ရတယ်ကွ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်လိုက်ရင် မရောင်းမချင်း ဒီတစ်စီးပဲ စီးရတော့မှာ…၊ ဝယ်စလေးပဲ စီးကောင်းတာ…၊ အင်ဂျင်ကျသွားရင် တွန်းနှိုးရမှာ၊ အငှါးကပဲ ကောင်းပါတယ် ” ကိုသိန်းဦး ဆေးလိပ်တိုခဲကာ ဆရာမလေး ရှင်းရာ ကို မြင်ယောင်နေသည်။
ဆရာမလေးမှာ ကိုသိန်းဦး အလုပ်လုပ်သော ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှ ဆရာမလေးဖြစ်သည်။ အသက်က ၂၂နှစ်၊ အသား ဖြူဖြူ၊ အရပ် ၅ ပေခွဲခန့်၊ ချောသည်ဟု ပြောနိုင်သော မျက်နှာပေါက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အလှဆုံးက သေးကျဉ်သောခါး၊ လုံးဝန်းသော တင်ပါး နှင့် မို့မောက်နေသော ရင်သားတို့ဖြစ်သည်။ ပုရိသတို့ အသက် ရှည်နိုင်သော ကိုယ်လုံးမို့ ကိုသိန်းဦးအကြိုက်ပုံစံဖြစ်သည်။ ကြိုက်သည်မှာ ရာဂစိတ်သက်သက်။ ကိုသိန်းဦးမှာ ဆရာမလေးကို အတွေးနှင့် ပြစ်မှားနေသည်။ ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ရန် အကြံထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်းရာ ကချင်ပြည်နယ်မှ ရွာလေးတစ်ရွာမှ ဖြစ်သည်။ မိဘများ ဆုံးပါးသွားပြီးတည်းက အဒေါ်ဖြစ်သူ၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်တွင် ပညာသင်ကြားရင်း ၁၀တန်းအောင်တော့ ရန်ကုန်တွင် အဆောင်နေ၍ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တက်သည်။ ဘွဲ့ရပြီးသော်လည်း ရွာမပြန်တော့ဘဲ ရန်ကုန်တွင်သာ အလုပ်ရှာရင်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက မိတ်ဆက်ပေးမှုဖြင့် သင်တန်းဆရာမအလုပ်ရသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူထံ တစ်နှစ်တစ်ခါသာ ပြန်သည်။ ည ၈နာရီခန့်…။ ကိုသိန်းဦးတစ်ယောက် လုပ်နေကျအတိုင်း သင်တန်းခန်းမထဲ လှည့်ပတ်စစ်ဆေးနေသည်။
စားပွဲတစ်လုံးရှေ့အရောက် ကိုသိန်းဦး ရပ်လိုက်ရင်း စားပွဲအောက်မှ အံဆွဲသော့ပေါက်ထဲသို့ သော့တစ်ချောင်းထိုး၍ လှည့်လိုက်သည်။ သော့ပွင့်သွားတော့ အိပ်ကပ်အတွင်းမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ထုတ်၍ အံဆွဲထောင့်သို့ ထည့်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက် မမြင်စေရန် ဖိုင်တွဲများဖုံးထားလိုက်ကာ အံဆွဲကိုသော့ပြန်ခတ်ကာ လျှို့ဝှက်သော အပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း လှည့်ထွက်သွားသည်။ မနက် ၁၀နာရီခန့်…။ သင်တန်းခန်းမအတွင်း ပြဿနာတက်နေသည်။ သင်တန်းသူတစ်ယောက် လက်စွပ်ပျောက်သွား၍ ရှာရန် ကိုသိန်းဦးကို ခေါ်သည်။ ကိုသိန်းဦးက လုံခြုံရေး အစောင့်ဆိုတော့ တာဝန် ရှိသည် မဟုတ်လား။ ကိုသိန်းဦး ကောင်မလေးအား နည်းနည်းပါးပါး မေးမြန်းပြီး သင်တန်းသားများကို သင်တန်းရှိ လူတိုင်း၏ လွယ်အိပ်များ၊ စားပွဲများအားရှာရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းလိုက်သည်။ အားလုံးက ခွင့်ပြု၍ ဆရာမလေး ရှင်းရာဘက်လှည့်၍… ” ဆရာမလေးရော ခွင့်ပြုတယ်မဟုတ်လား”ဟု မေးလိုက်သည်။
ရှင်းရာ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။ ဆရာမလေးထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရသည်နှင့် ကိုသိန်းဦး လက်စွပ်ရှာပုံတော် ဖွင့်တော့သည်။ သင်တန်းရှိ ခုံတိုင်း၊ စားပွဲတိုင်း ရှာသည်။ မတွေ့။ နောက်ဆုံး ဆရာမလေး ရှင်းရာခုံသာ ကျန်တော့သည်။ ” ဆရာမလေးခုံလည်း ရှာမယ်နော် ” ” ရှာပါရှင့်၊ ရပါတယ်..” ရှင်းရာက ပြောရင်း အံဆွဲသော့ကိုယူကာ ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ သိန်းဦးတစ်ယောက် ဟိုလှန် ဒီလှန် လုပ် နေသည်ကို ရှင်းရာကကြည့်နေရာမှ မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ အံဆွဲထောင့်မှ လက်စွပ်ကို မြင်လိုက်ရ၍ ဖြစ်သည်။ ကိုသိန်းဦးနှင့် ရှင်းရာ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားသည်။ ကိုသိန်းဦးက သနားသောအကြည့်ဖြင့်၊ ရှင်းရာက နားမလည်သောအကြည့်၊ ဝေခွဲမရသောအကြည့်။ ” မတွေ့ဘူး။ ထမင်းစားချိန်လည်း ရောက်နေပြီ။ ထမင်းစားပြီးမှ ဆက်ရှာပေးမယ်နော်..၊ သမီးလည်း ထမင်းစားဦး။ စိတ်မပူနဲ့.. တွေ့မှာပါ သမီးရဲ့ ” ” ဟုတ်ကဲ့၊ ဦးကိုပဲ အားကိုးပါတယ်.. ကူညီပါနော်.. ” ” အေး..အေး..သမီး ဦးသေချာ ရှာပေးပါ့မယ် ” ကိုသိန်းဦး လက်စွပ်ပျောက်သော ကောင်မလေးကို အားပေးစကားပြောရင်း ရှင်းရာကို တချက်ကြည့်ကာ အပြင်ထွက်သွားသည်။ သင်တန်းသူ/သားအားလုံးလည်း အပြင်ထွက်သွားကြသည်။
ရှင်းရာ ဘာလုပ်ရမည်မသိတော့..။ တစ်ယောက်ယောက် တမင်လုပ်ကြံတာဟု တွေးမိတော့ ကိုသိန်းဦးကို မြင်ယောင်မိသည်။ ထိုအခိုက် အခန်းထဲ ကိုသိန်းဦး ဝင်လာသည်။ ” ကဲ.. ဆရာမ ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” “ဒါ ရှင်တမင်အကွက်ချပြီး လုပ်တာမဟုတ်လား.. ” “ဆရာမ ထင်ချင်သလိုထင်လို့ရတယ်။ ခုလောလောဆယ်မှာ လက်စွပ်က ဆရာမ ဆီမှာ.. ကျွန်တော် ပြောပြလိုက်ရင် ဆရာမ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ သေချာစဉ်းစားနော် ” ရှင်းရာ တစ်ချက်တွေဝေသွားသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်သုံးသပ်သည်။ လက်စွပ်ပျောက်သည်..၊ မိမိစားပွဲရှိ အံဆွဲထဲတွင် ပြန်တွေ့သည်..။ လုပ်ကြံခံရသည်ဆိုသော်လည်း မိမိဘက်မှ သက်သေမရှိ။ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် အထင်သာဖြစ်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ မိမိသာ တရားခံ။ ငြင်းဆန်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိပေ။ ရှင်းရာ သက်ပြင်းချလိုက်သည်။ ကိုသိန်းဦးက အောင်နိုင်သူပုံဖြင့်… ” ဆရာမ… သူခိုးမဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ ထောင်နန်းစံ ရတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ပြောစကားနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့.. ဆရာမကို ကူညီမယ် ” ရှင်းရာ စဉ်းစားရပြီ။ သူခိုးမအဖြစ်နှင့် ထောင်ကျရင် မိမိဘဝမှာ အရှက်ရော၊ သိက္ခာပါ ကုန်ပြီ။ အသက်ပင် ဆက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်။ သူ့စကားနားထောင်လျှင် မိမိသိက္ခာဆယ်နိုင်မည်။ အရှက်တော့ ကွဲပေမည်။
လူအများရှေ့တွင် အရှက်ကွဲမည်ထက် သူ့တစ်ယောက်တည်းရှေ့ အရှက်ကွဲခြင်းက တော်သည်ဟု တွေးကာ… ” ရှင် ဘယ်လိုကူညီမှာလဲ.. ” ” လက်စွပ်ကို တွေ့တာ ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်ပဲ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်လက်စွပ်ကို ဆရာမဆီက တွေ့တယ် မပြောဘဲ တခြားကတွေ့တယ်ဆိုရင် ” ” ကောင်းပြီလေ.. ညနေကျရင် ရှင်ပြောသလို လုပ်ပေါ့.. ” ” ဆရာမ ကျွန်တော့်စကားနားထောင်မလားဆိုတာ မသိရသေးဘဲ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ” သိန်းဦးကိုများ ဘာထင်နေလဲ ပုံစံဖြင့် ဆရာမရှင်းရာကို ကြည့်ကာ ပြောလိုက်သည်။ ” ရှင်းရာ ကတိပေးပါတယ်ဆို.. ” ” ကတိပေးတာ လွယ်တယ်၊ တည်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံဘူး ဆရာမ ” ရှင်းရာ စိတ်ညစ်သွားသည်။ မထူးတဲ့အဆုံး… ” ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြော.. ” ” ၃ရက်တိတိ ဆရာမ ကျွန်တော် ခိုင်းတာလုပ်ရမယ်။ ၃ရက်ပြည့်ရင် လက်စွပ်ကို ကျွန်တော် အမှိုက်သိမ်းရင်း တွေ့တယ်ဆိုပြီး ပေးလိုက်မယ်။ ဆရာမလည်း ခိုင်းတာမလုပ်ရတော့ဘူး ” ” ရှင် ကတိမတည်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. ” ” ဆရာမ ကျွန်တော်ကတိတည်စေရမယ်။ မယုံရင်တော့ အဖြစ်မှန်အတိုင်းပေါ့ ” ရှင်းရာ ဘာမျှမတတ်နိုင်။ ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံကိုသာ ပြေးနင်းရတော့မည်။
” ကောင်းပြီလေ..။ ရှင်ခိုင်းတာ ၃ရက် လုပ်ပေးမယ်။ ရှင်သာ ကတိတည်ပါစေ.. ” ” သိန်းဦးဆိုတဲ့ကောင်က ပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ်။ ဘယ်တော့မှ မလွဲစေရဘူး။ အရင်ဆုံး ဆရာမ ညကျရင် ဒီကို ပြန်လာခဲ့..၊ အလှပြင်လာ ” သိန်းဦးပြောရင်း ရှင်းရာ၏ဖင်ကို လက်ဖြင့် ပုတ်ကာ အပြင်ပြန်ထွက်သွားသည်။ ဖတ်ကနဲ ဖင်ပုတ်ခံလိုက်ရ၍ ရှင်းရာ လန့်သွားသည်။ တဖြည်းဖြည်း အချိန်များကုန်ဆုံးကာ ရှင်းရာ မရောက်ချင်သော ညသို့နီးကပ်လာသည်။ ရှင်းရာ ရေချိုးသန့်စင်ကာ မှန်တင်ခုံရှေ့ထိုင်ကာ အလှပြင်နေသည်။ အလှပြင်ကာ သင်တန်းရှိရာသို့ လေးပင်သောခြေလှမ်းတို့ဖြင့် ထွက်လာခဲ့တော့သည်။ သိန်းဦးတယောက် အလုပ်များနေသည်။ သင်တန်းခန်းမနှင့်ကပ်လျက် အခန်းလွတ်ကို ပြင်နေသည်။ ဒီအခန်းက သင်တန်းပိုင်ရှင်သူဌေး နေရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သူဌေးရဲ့မိန်းမက မနေချင်၍ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ပြီး နေတာကြောင့် လွတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သိန်းဦး အခန်းရှင်းပြီးတာနဲ့ ရေမိုးချိုးကာ ထမင်းစားလိုက်သည်။ ထမင်းစားပြီး အပေါက်ဝကို လှမ်းကြည့်မိတော့ ဆရာမလေးဝင်လာသည်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။
ထမိန်နှင့် အင်္ကျီခါးတင်ရင်စေ့ကို တွဲဝတ်ထားသည်။ မြန်မာဆန်ဆန်သာ ဝတ်လာသည်။ ရှင်းရာ စကပ်ဝတ်ရန် စိတ်ကူးထားပြီးမှ စိတ်ကူးပြောင်းကာ ထမိန် ပြောင်းဝတ်လိုက်သည်။ သိန်းဦး ရှင်းရာ၏ကိုယ်လုံးကို အားရပါးရ ကြည့်ကာ… ” ဆရာမစောသားပဲ။ ဆရာမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက ကျွန်တော့်အကြိုက်ပဲ။ တင်ပါး တောင့်တောင့်နဲ့ ” သိန်းဦး၏ခရီးကြိုနှုတ်ဆက်မှုပင် ဖြစ်သည်။ ဒါ အစပဲ ရှိသေးတယ်..။ ရှင်းရာ ရှက်သွားသလို ဒေါသလည်းထွက်သွားကာ… ” အပိုတွေ ပြောမနေနဲ့။ ဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲ.. ” ဒေါသကြောင့် အသံမာမာနှင့် မေးလိုက်သည်။ သိန်းဦးကို လာစမ်းချင်တယ်ပေါ့..။ ဒါမျိုးရမလား..ဟု စိတ်ထဲတွင်ကြိမ်းလိုက်ကာ… ” ဆရာမ ဒေါသတွေ သိမ်းထားလိုက်..။ နောက်တစ်ခါ ဒီလေသံမျိုးကြားရင် သဘောတူညီမှု ပျက်ပြီသာ မှတ်ထားလိုက်။ ဘာခိုင်းမှာလဲဆိုတော့.. ငါလိုးတာ ခံခိုင်းမှာ ” သိန်းဦး ရိုင်းရိုင်းပင် ပြောလိုက်သည်။ ပထမ အဲ့လောက်ပြောဖို့ စိတ်ကူးမရှိ။ ရှင်းရာ နားရှက်သွားသလို မျက်နှာရဲသွားသည်။ လန့်ပင်လန့်သွားသည်။ ရှင်းရာ စိတ်လျှော့လိုက်သည်။ သိန်းဦး ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ကာ ရှင်းရာအား အရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်စေ၍ အင်္ကျီချွတ်ခိုင်းလိုက်သည်။
” အင်္ကျီချွတ်လိုက်။ ဘရာဇီယာပါ ချွတ်..။ ဖြေးဖြေးချင်းချွတ် ” ရှင်းရာ အင်္ကျီကို ခပ်မြန်မြန်ချွတ်နေသောကြောင့် ဖြေးဖြေးချင်းချွတ်ဟု ပြောလိုက်သည်။ ရှင်းရာမှာတော့… မိမိမှာ အပျိုစင်မဟုတ်သော်လည်း အရှက်ကြီးသည်။ သုံး-လေးခါသာ ချစ်သူအလိုကျ ခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတောင် အခုလိုမဟုတ် ဘရာဇီယာကို လှန်ရုံသာ လှန်ပေးသည်။ ဘယ်တော့မှမချွတ်ခဲ့။ အခုမှ မိမိထက် အသက်၂ဆကြီးပြီး မိမိအလုပ်မှ အစောင့်၏ရှေ့မှာမှ ပြည့်တန်ဆာလ်ို ပြုမူပြနေရသည်ကို တွေးရင်း ဝမ်းနည်းလာသည်။ ” မင်းနို့လေးက ငါထင်တာထက်ပိုလှပါလား။ ဖြူပြီးလုံးနေတာပဲ။ နို့သီးခေါင်းက နီရဲနေတော့ နို့စို့လို့ကောင်းမယ်..။ အရှေ့တိုးလာ ” သိန်းဦး ပြောသည်အတိုင်း ရှင်းရာ ရှေ့တိုးသွားသည်။ ရှင်းရာ မျက်ရည်ဝဲနေသည်ကို သိန်းဦးတွေ့ရာ သနားစိတ်ထက် ကာမစိတ်သာ ထန်လာသည်။ အနားရောက်နေသော ရှင်းရာ၏နို့နှစ်လုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲညှစ်လိုက်သည်။ “အ..နာတယ်.. ” ရှင်းရာ နာကျင်မှုကြောင့် ညည်းညူမိသည်။ သိန်းဦး နို့အုံနှစ်လုံးကို ကိုင်ကာ ကစားနေသည်။ နို့သီးထိပ်လေးကို လက်ညှိုးနှင့် လက်မဖြင့် ပွတ်ချေရင်း ထမိန်ချွတ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထမိန်ချွတ်ချလိုက်သည်နှင့် ပင်တီအဝါဖျော့ရောင်လေးမှာ ထင်းခနဲပေါ်လာသည်။
ပင်တီမှာ တင်းနေ၍ အဖုတ်ကို အဖောင်းလေးအတိုင်း… ” စောက်ဖုတ်ကို ဖောင်းနေတာပဲ။ လူလှသလောက် စောက်ဖုတ်လည်း လှတယ်။ အားရအောင် လိုးပစ်မယ် ” သိန်းဦး ပြောပြောဆိုဆို ရှင်းရာ၏အဖုတ်ကို ပင်တီပေါ်မှ ပွတ်နေသည်။ လက်တစ်ဖတ်က ဖင်ကို ပွတ်သည်။ ရှင်းရာမှာ စောစောက နို့ကို ကစားပေးစဉ်ကပင် ကာမစိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့် ရှက်စိတ် လျော့ပါးသွားသည်။ ယခု အဖုတ်လှန်ပြရတော့ ရှက်စိတ်ဖြစ်သော်လည်း ခဏသာ..။ အဖုတ်လေး အပွတ်ခံရ၍ ကာမစိတ်ထလာပြန်သည်။ ” ငါ့ပေါင်ပေါ် ခွထိုင်လိုက်…။ ဒါမှ နင့်နို့တွေ အားရပါးရ စို့လို့ရမှာ ” သိန်းဦး ခိုင်းသည့်အတိုင်း ရှင်းရာ လိုက်လုပ်သည်။ ပေါင်ပေါ်ထိုင်လိုက်သဖြင့် သိန်းဦးပါးစပ်က နို့သီးထိပ်လေးနှင့် တည့်သွားသည်။ သိန်းဦး နို့တစ်ဖက်ကို စုပ်ရင်း လျှာထိပ်လေးဖြင့် နို့သီးထိပ်လေးကို ကလိသည်။ ကျန်နို့တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ကစားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က တကိုယ်လုံးပွတ်နေရာ ရှင်းရာ ကာမစိတ် အတော်တက် လာသည်။ တချက်တချက် ညည်းသံပင် ထွက်သည်။
” အင့်..ဟင့်…….အင်း.. ” သိန်းဦး သိလိုက်သည်.. ရှင်းရာ စိတ်ပါလာပြီ။ ” ဆရာမလေး မတ်တပ်ရပ်လိုက် ” ရှင်းရာ မတ်တပ်ရပ်ပေးလိုက်သည်။ သိန်းဦးက ရှင်းရာ ပင်တီလေးချွတ်ရင်း… ” ဆရာမလေး.. စောက်ဖုတ်အရည် ထွက်နေပါလား။ ပင်တီမှာ စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေပြီ။ ခံချင်လာပြီလား… ဆရာမ ” ဆရာမဆိုမှ ရှင်းရာအသိက အကျပ်ကိုင် ခံရသည်ကို သတိရသည်။ သို့သော် သိပ်မရှက်တော့။ ကာမစိတ်က မြင့်နေသည်လေ…။ သိန်းဦးလက်က ရှင်းရာ စောက်ဖုတ်လေးပေါ်တွင် အထက်အောက်ပွတ်နေသည်။ အစိလေးကို မထိတထိ…။ ရှင်းရာတယောက် ကာမစိတ်ရွလာ၍ ညည်းသည်။ ” အင့်….ဟင့်…ဟင်း…အင်း…..အ.. ” လက်ခလယ်လေးက အဖုတ်မြောင်းကြားထဲမှ အစိလေးကို ပွတ်ချေလိုက်သည်။ ” အင့်…” ရှင်းရာ ညည်းသံ နည်းနည်းကျယ်သွားကာ တွန့်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ” စောက်စိလေးကို ပွတ်ပေးတာ ကောင်းလား ” ” အင့်…ဟင့်…ဟုတ်..အင်း….အ.. ” ရှင်းရာက အရည်ရွှမ်းသူမို့… ယခုလို အစိလေးက်ို ကလိနေတော့ အရည်များထွက်နေသည်။ ရှင်းရာမှာ နှာထန်သူဖြစ်သည်။
” အင့်..အင့်….ယားတယ်…. တော်တော့။ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တော့…အင့်..ဟင့်.ဟင်း.. ” ” အလိုးခံချင်ပြီပေါ့…။ စကားလုံးရင့်ရင့်တွေနဲ့ လိုးဖို့ တောင်းပန်မှ လိုးမယ်…။ ငါကြိုက်တဲ့စကားလုံး မကြားရမချင်း… မရပ်ဘူး ” ရှင်းရာမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့ ထိုသို့ ပြောရန် ပါးစပ်မရဲပါ၊ ရှက်သည်။ “`မပြောဘူး ဒင်းက ယောက်ျားပဲ၊ မလုပ်ဘဲတော့ မနေနိုင်ပါဘူး ငါ ခဏသည်းခံလိုက်ရင် ပြောစရာမလိုဘဲ ဖြစ်သွားမှာပါ..´´´ဟုတွေးကာ အံကြိတ်ပြီး ခံသည်။ အံကြိတ်ခံနေပေမဲ့ ကာမစိတ်က ပိုပိုတိုးလာသည်။ သိန်းဦး၏ကျွမ်းကျင်စွာ ကာမနှိုးဆွမှုအောက် ရှင်းရာတစ်ယောက် အလူးအလဲ… “အင့်..ဟင့်..ဟင့်… အ..အ.အင့်..ဟင့်….အီး..” ညည်းသံများ ပိုမြန်၊ ပိုကျယ်လာကာ ရှင်းရာ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တုန်ရီသွားသည်။ သိန်းဦးကလည်း ရှင်းရာအကြံကို ရိပ်မိသည်။ ဒါကြောင့် ကာမခလုတ်ဖြစ်သော အစိလေးကို ပိုပြင်းထန်စွာ နှိုးဆွလိုက်သည့်အပြင် လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲ ဖြေးညှင်းစွာ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ အစိလေးကိုလည်း လက်မဖြင့် ဖိချေသည်။ နောက်လက်တစ်ဖက်က နို့နှစ်လုံးပေါ် ဘယ်ညာ ကူးချည်သန်းချည် လုပ်နေလေသည်။ ရှင်းရာမခံစားနိုင်တော့ သိန်းဦးလက်ကို အတင်းတွန်းသည်။
“မခံစားနိုင်တော့ဘူး… ဟင့်…အ.အား.. မနှိပ်စက်ပါနဲ့ …ဟင့်.. တော်ပါတော့နော်.. ” ရှင်းရာ တောင်းပန်တိုးလျှိုးလိုက်သည်။ ရှင်းရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရည်များရွှဲနေပြီ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ပင် တစ်စက်စက်ကျနေပြီမို့ မခံနိုင်တော့။ ကားထားသော ပေါင်များစိလိုက်ပြီး လက်ကလေးဖြင့် သိန်းဦးကို အတင်းတွန်းသည်။ ” ဒီမှာ ဆရာမ၊ ဆရာမ မခံနိုင်ရင် လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ကျွန်တော်ပြောခိုင်းတာပြော ရုန်းကန်နေမယ်ဆိုရင် တော့ သဘောတူညီချက်ကို ဖျက်ပစ်ရလိမ့်မယ်နော်..။ မပြောသေးဘူးဆိုရင် ဆရာမလက်တွေကို ခေါင်း နောက်မှာ ထားလိုက်..။ ပေါင်လည်း ဟလိုက်။ ကျယ်ကျယ်လေးဟ ” သိန်းဦးအသံက မတိုးမကျယ် လေအေးနှင့်သာ။ သို့သော် အထက်စီး ဆန်သည်။ ရှင်းရာ ပြောဖို့တော့ စိတ်မကူး၊ လက်ကိုသာ ခေါင်းနောက်တွင် ထားပြီး ပေါင်လေးကို ဟပေးလိုက်သည်။ ခုနက စကားပြောလိုက်၍ ကာမမီးအရှိန် အတန်ငယ်လျော့သွား၍ ပြောခိုင်းသည်ကိုမပြောဘဲ တင်းခံလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သိန်းဦးဒီတစ်ခါ ပိုကြမ်းတော့သည်။
“`မိရှင်းရာ ဒီတစ်ခါ နင် င့ါကိုတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ လိုးခိုင်းဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့´´´ဟု စိတ်ထဲတွင် ကြိမ်းကာ ရှင်းရာ အဖုတ်ကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ခပ်ဟဟလေး လုပ်ပြီး အစိလေးကို ညာလက်လက်ခလယ်ဖြင့် ခပ်ဖွဖွလေးပွတ်လိုက်သည်။ “အင့်…..ဟင့်..ဟင့်..အင်..အ…အ….ဟင့်.ဟင့်” ညည်းသံလေး ပြန်ထွက်လာသည်။ ကိုယ်လုံးလေးလည်း တွန့် တွန့်တက်နေသည်။ သိန်းဦးအစိကို လေး-ငါးကြိမ်ပွတ်ပြီး လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်းပြီး ဂျီစပေါ့ လေးအား ရှာဖွေလိုက်သည်။ ဂျီစပေါ့ ကိုတွေ့ပြီ။ ရှင်းရာ၏တုန်ခါသွားသည့်ကိုယ်လုံးလေးက သက်သေ။ သိန်းဦး၏ကျွမ်းကျင်စွာ နှိုးဆွမှုကို ရှင်းရာ လက်မြှောက်ကာ အရှုံးပေးရပြီ။ “ရှင်းရာ သေပါပြီး အင်.ဟင့်…ဟင့်..အင်း… ထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့နော်… ရှင်းရာ တောင်းပန်ပါတယ် .. အင့်..အင့်… ရှင်းရာကို လုပ်ပေးပါတော့နော်…. အင်း…အား…ဟင့်ဟင့်.. ” ရှင်းရာ၏တောင်းပန်မှုက သိန်းဦးအကြိုက်မဟုတ်။ ” ဒီထက် ပိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလေ.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းစကားလုံးတွေ သုံးပြီးပြော ” အရှက်ကုန်အောင်ကို ပြောရမည့် စကားလုံးများကို ရှင်းရာ မပြောလိုပေမဲ့ ခုလို ကာမသွေးဆိုး ရွပိုးထိုးနေအောင် နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကိုသာ ဆက်ပြီး ခံစားရလျှင် ရှင်းရာ သေတာထက် ပိုဆိုးမည်။
ဒါကြောင့်… ” ရှင်းရာကို လိုးပေးပါတော့နော်…. ရှင်းရာ မခံနိုင်တော့လို့ပါ…. လ်ိုးပေးတော့နော်.. ” ” မကြိုက်သေးဘူး.. ပြန်ပြင်ပြောဦး ” သိန်းဦးမှာ အရမ်းလိုးချင်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အခုချိန် အပိုင်ကိုင်ထားနိုင်လျှင် နောင်မိမိ ထားရာနေ စေရာသွား စိတ်တိုင်းကျ ခိုင်းစေန်ိုင်မည်ကိုသိ၍ အောင့်အည်းထားနေရသည်။ ” ရှင်းရာ စောက်စိတောင်ပြီး အရမ်းခံချင်နေပါပြီရှင်.. ရှင်းရာ စောက်ဖုတ်ကို လိုးပေးပါတော့နော်… ရှင့်လီးနဲ့ ရှင်းရာ စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လိုးပေးပါတော့… အလိုးမခံရရင် သေပါတော့မယ်ရှင်.. ” ရှင်းရာ အသိဝယ် ရှက်စိတ်မရှိတော့..။ သိက္ခာတွေ၊ မာနတွေလည်း ပျောက်ကုန်ကာ အလိုးခံရရေးသာ သိတော့သည်။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲပင် မယောင်ဘူးသော စကားလုံးမျိုးစုံကိုသုံးပြီး လိုးပေးရန် တောင်းပန်တော့သည်။ ရှင်းရာတောင်းပန်စကားကို ကြားလိုက်ရ၍ သိန်းဦးကျေနပ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်းရာအား မတ်တပ်ရပ်စေပြီး ဖင့်ကိုကော့ခိုင်းထားကာ အနောက်မှနေ၍ အားရပါးရ လိုးလေတော့သည်။….. သိန်းဦး၏ မိန်းမကျမ်းကျေမှုကြောင့် ရှင်းရာခမျာ အရှက်တကွဲ အလိုးခံနေရသော်လည်း စိတ်ထဲ၌မူကျေနပ်သလို ခံစားနေရလေသည်။ မိရှင်းရာ ဘယ်လိုလဲ လိုးခံရတဲ့ အရသာလေးကကောင်းတယ် မဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ အရမ်းကောင်းတယ် မြန်မြန်လေး လိုးပေးပါ… အရမ်းကောင်းနေပြီ ပြီးတော့မယ်… အား…အား..အင့်…ဟင်း သိန်းဦးလည်း ရှင်းရာအား နည်းမျိုးစုံသုံးကာ လိုးလေတော့သည်။
လိုးပွဲကြီး ပြီးတော့ ရှင်းရာခမျာ အဖုတ်က နာလည်းနာကောင်းလည်းကောင်း အရည်များစိုရွှဲကာ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေသည်။ လူလည်း အားအင်ကုန်ခန်းကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် အရုပ်ကြိုးပြတ် လဲနေလေတော့သည်။ သိန်းဦးလည်း ကုလားထိုင်ကိုကျောမှီကာ အနားယူနေသည်။ ခဏအကြာတော့ သိန်းဦးက ဆရာမလေး ကျွန်တော့်စကားနားထောင်ပြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်းလုပ်ရမယ်နော်.. ကျွန်တော် ခိုင်းမှာက- ၁. ဒီနေ့ကစပြီး သဘောတူထားတဲ့ သတ်မှတ်ရက်ထိ ဆရာမလေး အတွင်းခံ ပင်တီ မ၀တ်ရဘူး.. ၂. သင်တန်းမစခင် နာရီဝက်ကြိုပြီး ကျွန်တော့်ဆီလာခဲ့ရမယ်…ကျွန်တော် ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းမယ်… ၃. သင်တန်းပြီးရင် ကျွန်တော့်ဆီလာရမယ်.. ကျွန်တော် ပြန်ခွင့်ပြုတဲ့ အချိန်မှ ပြန်ရမယ်… ၄. အဲ့ဒီအချက်တွေကို မလိုက်နာရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ပေးခံရမယ်… ဆရာမလေး ကြားလား…. ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ ကိုသိန်းဦး ကြားပါတယ်ရှင်…. ရှင်းရာ အဖို့ပေဖြစ်သမျှခံရန်သာ ရှိတော့သည်။ ရှင်းရာအား အားရပါးရလိုးလိုက်ရသည့် သိန်းဦးမှာ ရှင်းရာအား လိုးရရုံ မကျေနပ်သေးပေ။ သိန်းဦးမှာ ရှင်းရာက မိမိ၏ ကျွန်ကဲ့သို့ မိမိခိုင်းသမျှ လုပ်စေချင်သည်။ ကဲ…ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ.. ပြန်လို့ရပြီ… စည်းကမ်းတော့ မမေ့နဲ့နော်…. စည်းကမ်းမလိုက်နာရင် အပြစ်ပေးခံရမယ်… ရှင်းရာ ဘာမျှပြန်မပြောနေတော့…ဟုတ်..တစ်ခွန်းသာပြောပြီး မိမိ အ၀တ်အစားများ ၀တ်နေသည်။
ဟိတ်…. ပင်တီမ၀တ်ရဘူးလေ..အပြစ်ပေးခံထိချင်ပြီလား..ဆရာမလေး.. ရှင်းရာ ၀တ်လက်စ ပင်တီအား ဆက်မ၀တ်နိုင်ပဲ ပြန်ချွတ်လိုက်ရသည်။ ပြီး ထဘီကို ယူကာ ၀တ်လိုက်သည်။ ကဲ…ဆရာမလေး စည်းကမ်းဖောက်တဲ့ အတွက် ကြိမ်ဒဏ်ပေးမယ်… ဒါက အစမို့လျှော့ပေးလိုက်တာနော်..နောက်တစ်ခါဆို မရဘူး…. ရှင်းရာ ပြန်ပြောရန် ပါးစပ်ဟလိုက်သော်လည်း ပြန်မပြောဖြစ်တော့… ဆရာမ ထဘီကို ဖင်ပေါ်အောင်လှန်ပေး… ဟိုဘက်လှည့်..” ဟုပြောကာ ကြိမ်လုံးဖြင့် ရှင်းရာ ဖင်တုံးဖြူဖြူးလေးပေါ် တစ်ချက်ရိုက်လိုက်သည်။ ရွှမ်း….အ…..အမေ့ သိန်းဦး အားသိပ်မထည့်ပဲ ရိုက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ရှင်းရာ ဖင်ဖြူဖြူပေါ်တွင်တော့ အရှိုးရာလေး ထင်းသွားသည်။ ရှင်းရာ လက်ကလေးဖြင့် ဖင်တုံးကို ပွတ်လိုက်သည်။ လက်ဖယ်စမ်း….. ထဘီကိုသေချာကိုင်ထား ၅ချက်ရိုက်မယ်… ရှင်းရာလည်း ထဘီကို ပြန်ပြီး မကာ ဖင်လှန်ပေးလိုက်သည်နှင့် ကြိမ်လုံး ၄ချက်ဆက်တိုက် ရိုက်ချလိုက်သည်။ ရှင်းရာ ဖင်ပြောင်ပြောင်ပေါ်ဝယ် အရှိုးရာ ၅ခု ထင်နေသည်။
ရှင်းရာလက်ကလေး ဖင်ကို ပွတ်ကာ မျက်ရည်များပင် ကျလာသည်။ ဟုတ်သည်လေ….မှတ်မှတ်ရရ ကိုးတန်းနှစ်က စာမရ၍ အရိုက်ခံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝအရိုက်မခံခဲ့ရ… အရိုက်ခံရမည်ကို စိုး၍ စာကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ယခု အပျိုဖြစ်မှ ဖင်လှန်ပြီး အရိုက်ခံရသည်မှာ ရှက်စရာလည်းကောင်းလှသည်။ နာသည်က မပြောပလောက်…ရိုက်တုန်းတစ်ချက်သာ နာသည်။ ဆရာမလေး ငိုမနေနဲ့…သွားပြန်တော့… မနက်ကျရင် ပင်တီမ၀တ်လာနဲ့ဦး.. နာရီဝက်နော်… ရှင်းရာလည်း မိမိပစ္စည်းပစ္စယ သိမ်းကာ ပြန်လာခဲ့တော့သည်။ ထိုညတစ်ညလုံး ရှင်းရာ မျက်ရည်နှင့် နှပါးသွားလိုက်လေသည်။ မိုးလင်းတော့ မျက်နှာသစ်ပြီးရေပါ တစ်ခါတည်းချိုးလိုက်သည်။ အလှပြင် အ၀တ်အစားများ ၀တ်လိုက်သည်။ ပင်တီတော့ မ၀တ်တော့… ရှင်းရာအဖို့ ပင်တီမ၀တ်ပဲ စကတ်ဒူးဖုံး အနက်အကျပ်လေးဝတ်ထာရာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မလုံ … ရှက်ရှက်နှင့်ပင် သင်တန်းသို့ လာခဲ့ရသည်။ သင်တန်းအောက်ရောက်တော့ ၃၅မိနစ်အလို… ကွတ်တိ….ရှင်းရာ သိန်းဦးနေသည့်အခန်းသို့ ကြည့်လိုက်သည်။ တံခါးပိတ်မထား၍ ၀င်လိုက်သည်။ ရှင်းရာ အထဲရောက်တော့ သိန်းဦးအထဲမှ ထွက်လာပြီး ဆရာမလေးက အချိန်တိကျသားပဲ… တံခါးပိတ်လိုက်… ရှင်းရာလည်း အခန်းတံခါးပိတ်ကာ လွယ်ထားသေး ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခုံပေါ်တင်လိုက်သည်။
ဆရာမလေး စကတ်လှန်လိုက် …. ရှင်းရာအဖို့ ကြိုတွေးထားပြီးပြီမို့ မကြောက်တော့ အရှက်လည်း ကုန်ခဲ့ပြီလေ.. ရှင်းရာ စကတ်အား လှန်လိုက်သည်။ ပင်တီ ၀တ်မထားဘူးပဲ.. လိမ္မာတယ်… ဆရာမ အဖုတ်ကဖောင်းဖောင်းမို့မို့လေး လှတယ်… လာ ငါ့ရှေ့ကိုလာခဲ့.. ရှင်းရာလည်း သိန်းဦးရှေ့အား စကတ်လေးမကာ သွားပြီး ရပ်လိုက်သည်။ ရှင်းရာ အဖုတ်မြောင်းလေးအား လက်ညှိုးဖြင့် ပွတ်လိုက်သည်။ အစိလေးကိုလည်း ပွတ်ကစားပေးလိုက်သည်။ ရှင်းရာတောင့်ခံထားသော်လည်း ကြာကြာမခံနိုင်.. အစိကပေးသော ကာမအရသာကို ခံစားလာရသည်။ အာ…ဆရာမလေး အဖုတ်ယားနေပြီပဲ .. အရည်တွေထွက်လာပြီပဲ..ဟုပြောကာ ရှင်းရာအား ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်ခိုင်းကာပေါင်းကားခိုင်းလိုက်သည်။ ပေါင် ကားသွားသည်နှင့် ရှင်းရာအဖုတ်လေးမှာ ပြဲအာသွားကာ အစိလေးမှာငေါက်တောက်လေးပေါ်လာသည်။ သိန်းဦးလည်း မနေနိုင်တော့ ရှင်းရာအစိအား လျှာဖြင့်လျက်လိုက်သည်။ ရှင်းရာ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သိန်းဦးမနားတမ်း အစိလေးအား လျှာထိပ်လေးဖြင့် ထိုးကစားလိုက် လျက်လိုက် လုပ်နေရာ ရှင်းရာ မနေနိုင်တော့ ညည်းသံလေးထွက်လာသည်….စောက်ရည် များလည်းထွက်လာသည်။
သိန်းဦးက လက်ဖြင့် အပေါက်ထဲ လက်ခလယ်လေးထည့်ကာ ဂျီစပေါ့ နေရာအား ပွတ်ကစားပေးလိုက်ရာ ရှင်းရာတစ်ယောက် ထွန့်ထွန့်လူး ဖြစ်သွားကာ.. အား…အင်း….အင်…ဟင်… ရမ္မက်သံလေးနှင့် ညည်းရှာသည်.. သိန်းဦးက အစိကို လျက်နေသည်ကို ရပ်လိုက်ပြီး… ဆရာမလေး ကောင်းလား စိတ်ပါလာပြီဟုတ်… ဟုတ်…အ့….အင်း..ကောင်းတယ် … ရှင်းရာ အသံဆုံးတော့ သိန်းဦး အဖုတ်ထဲမှ လက်ကို ဆွဲထုတ်ကာ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ ရှင်းရာ ကောင်းနေစဉ် အဖုတ်မှ လက်ဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရ၍ မချင့်မရဲ ဖြစ်သွားသည်။ ဆရာမလေး ဒီကိုလာ… ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး လီးစုပ်ပေးစမ်း…လက်တစ်ဖက်က ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုယ် ပြန်ပွတ်နေ…ဟိုဘက်လက်က ဂွင်းတိုက်ပေး… မြန်မြန်လုပ် သင်တန်းချိန်ရောက်တော့မယ်… ရှင်းရာ ရွံသော်လည်း မတတ်နိုင် .. သိန်းဦး၏ ထောင်မတ် နေသည့် လီးကြီးအား ဂွင်းတိုက်ပေးရင် ပါးစပ်ဖြင့် လိုးပေးလိုက်ရသည်။
လက်တစ်ဖက်ကလည်း အစိလေးကို ပွတ်ပေးနေရရာ ရှင်းရာ ကာမရာဂစိတ်တို့ ထန်လာပြန်ရာ လီးစုပ်သည်မှာလည်း မြန်လာသည်။ သိန်းဦး မနေနိုင်တော့ ရှင်းရာ၏ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန်လိုးကာ ပြီးသွားသည်။ သုတ်ရည်ကို ရှင်းရာ ပါးစပ်ထဲပင် ထုတ်လိုက်ရာ ရှင်းရာ အမြန်ထွေးထုတ်လိုက်ရသည်။ ရှင်းရာမှာ မပြီးသေး…လီးမစုပ်ရတော့ပေမဲ့ အဖုတ်ကိုတော့ ဆက်ပွတ်နေဆဲ.. သိန်းဦး ခဏနားပြီး ရှင်းရာအား မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းကာ လက်ခလယ်နှင့် လက်ညှိုးအား အပေါက်ထဲ ထည့်ပြိ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် လိုးပေးလိုက်ရာ ကြမ်းပေါ်သို့ပင် အဖုတ်ရည်များ ကျလာပြီး ရှင်းရာလည်း ပြီးသွားသည်။… ထိုချိန်တွင်ပင် သင်တန်းတတ်ရောက်ရန် ကျောင်း သား/သူတို့ ၀င်ရောက်လာလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ